Crnter eludongeni lomlambo.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAnatoliy
Wamkelekile kwiflethi yam epholileyo kufutshane nombindi wedolophu enamagumbi ama-2 (igumbi lokuhlala sofa yabantu aba-2, ibhedi yokulala yabantu abayi-2) unokuyibona kwifoto. Indlu ihonjiswe ngemibala efudumeleyo neqaqambileyo. Indawo ezolileyo nenoxolo.
Ndonwabile ukwazisa indlu yam epholileyo enamagumbi ama-2 (igumbi lokuhlala elinesofa enkulu, igumbi lokulala elinebhedi enkulu). Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ehamba emanzini, iifestile zibonelela ngombono omhle wepanoramic yomlambo kunye nesixeko
Ngemizuzu emi-5 hamba iziko lokuzonwabisa lorhwebo "BABYLON", ngemizuzu eyi-7 uhamba ngepaki "VORONTSOVSKY", imizuzu emi-5 uhamba elunxwemeni, kwimizuzu emi-5 iziko lokuzonwabisa lorhwebo "MOST CITY CENTER"
La magumbi abekwe kwi-MARSHALA MALINOVSKOGO yesitalato 6. Indlu ilungiswe umgangatho, umgangatho we-4.
Umgangatho woyilo unegumbi lokuhlala le studio elinekhitshi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela.
Igumbi lokuhlala linesofa, iTV enkulu yescreen enamajelo asekuhlaleni angaphezu kwe-100, i-air conditioning
Isantya esiphezulu kwi-Intanethi i-WI-FI isimahla kwiindwendwe.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngesitovu segesi, imicrowave, ifriji, umatshini wokuhlamba, iketile, isethi epheleleyo yezitya. Itheyibhile
Kwigumbi lokuhlala kukho ikhaphethi yoboya phantsi, ikhabhathi enkulu yesibuko.
Indlu yokuhlambela inebhafu, ishawa kunye nokukhanyisa, isitya sokuhlamba esinesibuko, indlu yangasese.
Eyadini kukho indawo yokupaka iimoto.
Ndingavuya ukukubona kwindawo yam yokuhlala.
Iyafumaneka: iWi-Fi yasimahla, umatshini wokuhlamba impahla, isomisi sempahla, iayini, itafile yentsimbi, iibhedi ezicocekileyo
Ukuba unemibuzo, vele ufowunele okanye undazise, ndiza kukuxelela ngokukhawuleza
Enye yezona ndawo zibalaseleyo kwiDnipro kubakhenkethi.
Ngakolunye uhlangothi, zonke iindawo ezidumileyo zembali zedolophu zibekwe ecaleni kwendlu, kwelinye icala kukho indawo efanelekileyo yokuhlalisa kunye nokuthenga. Eyona mivalo idumileyo kunye ne-disco kwi-Dnieper.
Sidibana nawe - undwendwe lwethu kufutshane nendlu (okanye, ukuba uyafuna, ndingashiya isitshixo kwindawo ekhuselekileyo)
Bonisa indawo yokuhlala, jonga i-Wi-Fi, iTV, amanzi ashushu
Kwaye ndinika izitshixo
Indawo izolile kwaye izolile, ukuya kwiziko le-15 imizuzu yokuhamba, ngemoto, iteksi imizuzu emi-5. Kufuphi nendlu kukho ipaki enhle "VORONTSOVSKY", apho kukho ulwandle, iinkundla ze-tennis, indawo yezemidlalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Anatoliy
Kunokuba sinako, ukuba siya kunceda